रियाल म्याड्रिडको एएस रोमामाथि ३–० को सहज जित !
असोज ०४, २०७५ बिगुल
म्याड्रिड (एजेन्सी) – डिफेन्डिङ च्याम्पियन स्पेनिस रियाल म्याड्रिडले युइएफए च्याम्पियन्स लिगको समूह चरणको पहिलो खेलमा सहज जित निकालेको छ । रियालले इटालियन क्लब एएस रोमामाथि ३–० को सहज जित निकालेको हो ।
रियाललाई जिताउन इस्को, ग्यारेथ बेल र मारियानो डियाजले गोल गरे । घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नबेउमा बुधबार राति भएको खेलमा रियालले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा इस्कोको गोलबाट १–० को अग्रता लिन सफल भएको थियो । इस्कोको प्रहार फ्रिकिक रोमाका गोलरक्षक रोविन ओल्सेनले रोक्ने कुनै मौका नै पाएन ।
५८औं मिनेटमा ग्यारेथ बेलले लुका मोड्रिचको पासमा गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई २–० को अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि इन्जुरी समयमा वैकल्पिक खेलाडी मारियानो डियाजले मार्सेलोको पासमा गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई ३–० को सहज जित दिलाए । मारियानो ७३औं मिनेटमा ग्यारेथ बेलको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए । रोमाले पनि गोलका कही मौका सिर्जना गरेपनि रियालको बलियो रक्षापङ्ति तोड्न सकेन ।
यो समुहको अर्काे खेलमा भिक्टोरिया प्लाजेन र सिएसकेए मस्कोले २–२ गोलको बराबरी खेल्दै अंक बँडे । समुह ‘जी’ मा पहिलो जितसहित रियालले ३ अंक जोडेको छ ।
प्रकाशित : बिहिबार, असोज ०४, २०७५०८:४८
‘म मेसी र रोनाल्डोजस्तै विश्वस्तरीय खेलाडी हौँ’ – ग्रिजम्यान
मोड्रिचले लाइक गरे पेरिसिचको पोस्ट ! के यो रियल छाड्ने सङ्केत हो त ?
आजको खेलमा सन्दिपको करियरकै खराब प्रदर्शन ! २ अाेभरमा ७ छक्कासहित ४७ रन दिए !
साफ सुजुकी कप –पाकिस्तान विजयी, नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाब
डीपीएल क्रिकेटः यतिबेला टिम चौराह धनगढी र रुपन्देही च्यालेन्जर्सबीच खेल हुँदै
मेस्सी र नेयमारभन्दा सुनील क्षेत्रीको धेरै गोल ! को हुन् क्षेत्री ?